Gini mere ndi ocha ji egosi SATAN dika ndi isi ojii? … Ọbụna ụfọdụ n’ime ụmụnna nwanyị nke anyị nwanyị na nwanne nwanyị kwenyesiri ike na Setan bụ onye isi ojii, dịka ndị ọcha na-anọchi anya anyị, ndị ọrụ ibe anyị na-enyere ya aka.
Site na: KongoLisolona: June 16, 2018 00: 35 Enweghị asịsa
Ma, ka onye ojii ahụ lekwasịrị anya na paradaịs ebe ọ ga-eketa ihe ọ bụla, ikike ya bụ isi mebiri, a kwanyere ugwu ya ùgwù, apụtaghị ya ihe ọ bụla. Ọ na-anakwere iyipụ agbụrụ ya maka Chineke na paradaịs atụgharị uche.
Ma ndị na-akpa ókè agbụrụ ndị na-eme ụdị nnọchianya a echefuru otu ihe, na mpụ nke nna Jizọs na ndị ya na Agba Ochie ji okpukpu nde karịa nke Setan mere. Ọtụtụ n’ime ha megidere Etiopia, mba Africa.
Ogbenye Akwụkwọ Nsọ Setan nwere nanị gburu 4 ndị mmadụ na ụmụ Job (Job 1: 19-20) bụ ihe dị njọ karịa onye omekome karịa onye okike nke eluigwe na ụwa, bụ onye rutere ụwa dum.
Enweghị ike nke ndị ojii / ndị Africa: naanị ndị ojii / ndị Afrịka nwere ike ịkpa agwa dịka nke a; otu ndị kwabatara na Naịjirịa na-ekpe ekpere maka mmeri, mmeri nke otu egwuregwu bọọlụ (Arsenal FC, England)
Ọkt31 02: 28